Ihe kachasị mma 24 Ugozi Idebe Ekebe Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe eji egbu egbu aghọwo otu n'ime ihe osise kachasị ochie nke ụmụ mmadụ chepụtara. Ọdịdị ahụ aghọwo ụdị nkwupụta ma ọ bụ nnupụisi dabere na ihe eji ya. E nwekwara ndị na-egbu egbu dị ka ụdị ihe ịchọ mma.
Ihe Uche Tattoo bụ ihe ị ga-achọ ịma. E nwere ọtụtụ ihe na-egbu egbu. Utu a bu nnunu nke egburu n'uwa dum ma tinye ya n'omume. O nwere ike ịpụta ike, ohere, amamihe, nnwere onwe, ike na oke, ike, ikike, ohere, ozi nke chi na ọnọdụ ime mmụọ. Ọ pụtara ọtụtụ ihe na ike dị ukwuu. Uche ahụ na-eme ka ọ dị iche iche na mmetụta nke ọchịchị ya. E nwere ọdịiche dị iche nke ugo nke na-abịa na nkọwa ha.
Ugo nke ugo na-ekwu banyere nnwere onwe na nchebe. Ọ bụrụ na ị na-achọ nnwere onwe, otu n'ime ntinye ị nwere ike ịga bụ igbu egbu ugo. Nchedo ọ na-enye bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji jiri ya na-elezi anya ọjọọ. A na-emepụta eserese nke ugo #tattoo n'ụzọ dị otú a ka e si kọwaa ihe ọ pụtara. Nke a bụ ya mere ọ na-ewu ewu ma ọ dịkwa obere. Nnukwu nnụnụ ahụ bụ ihe a na-atụle gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe nnukwu ihe nnọchite anya nke ịdị ukwuu na-etinye n'ahụ gị, akara ugo bụ ihe ga-eme ka nnọchiteanya ahụ.
Egwu egbugbere ọnụ aghọwo ihe zuru ụwa ọnụ bụ nke mere ndị mmadụ ji eji ya eme ihe gburugburu ụwa. Ụdị akara ugo nwere ike ịbụ nkà ma ọ bụrụ na ị bụ onye okike. Ụdị ugo dị ka nke a aghọwo anyị ngwa ngwa ụbọchị ọ bụla ọtụtụ mmadụ enweghị ike ime n'enweghị.
Ụdị akpa Eagle
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe akara ugo dị ka nke a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta ezigbo onye nlekọta ga - enyere gị aka.
Ụdị Eagle Dara
E nwere ọtụtụ ndị nọ n'ebe ahụ ga-enyere gị aka iji egbu egbu azu a. Ọtụtụ mmadụ ndị na-eji ejiji na ndị na-ahụ nkọ na ugo na-aga mgbe niile maka ndị ọkachamara n'ịdị na-edepụta akara.
Ụdị Azụ Azụ
Ịntanetị nwere ọtụtụ narị ndị mmadụ a bụ ndị ọkachamara n'iwe igbu egbugbere ọnụ na ọkwa ọzọ.
Ụkwụ Eagle akpa
Ọnụ ego nke ịchọta egbugbere anya dị mma agaghị abụ ọnụ dị ka ị na-eche. Mgbe ị na-ewepụta oge iji chọpụta ndị ọkachamara maka ịntanetị, ị ga-enwe nnukwu egbugbere ọnụ ugo ị gaghị akwa ụta.
Ụdị Uche Akpa
N'ihe na-egbu egbu egbu nke na-agbasa dị ka ọkụ ọkụ gburugburu obodo ndị dị n'ụwa, ị gaghị enwe ihe ịma aka ime nke a.
Ụdị Asagle Aka
Mgbe ị na-achọ ụzọ ị ga esi esi pụta ma ọ bụ ụdị ndụ ọhụụ ọhụrụ, akara ugo bụ otu ụzọ isi mee ya.
Ụdị Ugo Agụ
Enwere ihe ị ga-aghọta ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche inweta ezigbo egbugbere ugo nke ga-adịru ogologo oge.
Ụdị oke ugo
Ntụrụndụ na nkasi obi nke na-abịa na mgbu ahụ, mgbe ịbanye n'ime ya bụ ihe na - eme ka ọdịiche dị na nka.
Utu & Okpo Ugo
O nwere ike ịbụ na ị gaghị abụ onye mbido mbụ ma ọ bụrụ na e nwere egbu egbu ma e nwere ihe ị nwere ike ime iji nyere onwe gị aka.
Ugoro ugo oma
Ụdị ugo nwere ike ị mara mma, ma ị ghaghị ijide n'aka na ọ bụ ihe ịchọrọ tupu ịbanye. Ụdị ugo na-adịgide adịgide aghọwo ihe ọtụtụ ndị na-aga. Ọ bụrụ na ị ga-aga maka egbugbere anya ugo na-adịgide adịgide, ọ dị mkpa na ị ga-ezute ọkachamara ahụ ga-adụ gị akara ugo
E nwere oge a na-ewere akara dịka ihe mgbagwoju anya ma jiri ya na-ekwurịta banyere ọmụmụ, nsọ, nkwenkwe na nza karia. isi iyi
Otú ọ dị, ọ gafeela ụbọchị mgbe egbugbere ọnụ zuru oke n'ihi na anyị na-ahụ ọtụtụ nkọwa miri emi site na tattoos. isi iyi
Eji egbugbere ọnụ Eagle
Ụdị akara ugo aghọwo ihe nnọchianya nke ike na nnwere onwe ma ọ na-abịa na ụdị dị iche iche. Na America, ọ bụ ihe pụrụ iche nke na anyị na-ahụkarị ya n'ọtụtụ mmadụ. Kedu ihe ị chere banyere atụmatụ a? isi iyi
Ụdị Uche zuru ezu
Ụdị Uche Eagle
Ụta apata ụkwụ nwere ike ịga ogologo oge n'ịhụ na ị na-enye ugo nke na-anya isi na ị na-achọ. Ịnwere ike ịgbakwunye ya okooko osisi. isi iyi
Ụdị Ugo Akara
Ugo nwere ike ịbata na nsụgharị dịgasị iche iche na nke a bụ ihe ị nwere ike ime mgbe ọ dọtara dị ka nke a. Kedu ihe ịchọrọ maka igbu egbu a? isi iyi
Mee ka obi gị sie ike ma jiri ugo na-adọrọ mmasị na ya. Enweghi njedebe ihe i nwere ike ime na ugo siri ike. isi iyi
Ụdị Epekota Ọnụ
Egwuregwu ugo a na - ejikọta ya na ịbịgo ugo n'akụkụ akụkụ ndị ọzọ dị ka nke a. Nke a bụ ihe ụfọdụ ndị ikom na-eche nche na-eme n'ụbọchị ndị a. isi iyi
Ogbugbu uzo abuo
Ná ngwụsị nke ụbọchị ahụ, ugo nwere ike isi na anya ndị ọhụụ pụta. Ha dị mma na ihe ha na-eme nakwa na ị nwekwara ike ime ahụ gị ka ọ bụrụ ihe kacha mma site na igbu egbugbere ọnụ gị. Kedu ihe ị na-eche iji nweta akara egbugo nke gị. isi iyi
Pịa ebe a ka ịchọta Uche egbugbere ọnụ
Egwu ugoaka mma akaụkwụ akana-adọ aka mmaagbụrụ eboegbu egbu osisi lotusegbu egbu hennaGeometric Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokearịlịka arịlịkakoi ika tattoon'olu oluUche obizodiac akara akaraegbugbu egbugbuọdụm ọdụmegbu egbu okpuakwara obiNtuba ntughariakara ntụpọmma tattoosna-egbu egbunnụnụngwusi pusiokpueze okpuezeegbu egbuazụ azụenyi kacha mma enyiAnkle Tattoosaka akaakpị akpịrip tattoosegbu egbu mmirindị mmụọ ozimehndi imeweọnwa tattoosdi na nwunyeenyí egbu egbuechiche egbugbuụmụnne mgbuegbu egbu diamondegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu ebighi ebiegwu egwuegbu egbu egbuudara okooko osisindị na-egbuke egbukeaka akaima ima mmaỤdị ekpomkpa